शनिश्चरे बजारमा प्रकृति चस्मा घर तथा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन - Pahilo Online
शनिश्चरे बजारमा प्रकृति चस्मा घर तथा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन
पथरी शनिश्चरे । पथरी शनिश्चरे ९ शनिश्चरे बजारमा प्रकृति चस्मा घर तथा आखाँ उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । मंगलबार विधिवत रुपमा वडा नं. ९ की वडा सदस्य निर्मला गदालले रिवन काटेर उद्घाटन गरेकी हुन् । आफ्नै ठाँउमा चस्मा घर तथा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले व्यवसायीक सफलताको शुभकामना दिएकी थिइन्।
स्थानीय स्तरमै सर्वसाधारणलाई आखाँ सम्बन्धि सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको प्रोपाइटर पदमलाल बास्कोटाले जानकारी दिए । अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग गरी आखाँको जाँच, पुर्जा अनुसारको पावर चस्मा, प्रोग्रेसिप लेन्स, कन्ट्रयाक लेन्स साथै फेन्सी चस्मा सुपथ मूल्यमा विक्रि वितरणको सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
हप्ताको एक दिन डा. ललन रायको सेवा र डा. लिलाकान्त चौधरीबाट हरेका दिन ओपिडि सेवा विहानको ९ बजेदेखी बेलुका ५ बजे सम्म सेवा उपलब्ध रहनेछ। डा. लिलाकान्त चौधरी बिराटनगरको एक प्रतिस्थित आँखा अस्पतालमा अनुभव पाप्त डाक्टर हुन् ।
मंगलवार, ४ फाल्गुन २०७७, १३:१४ February 19, 2021 मा प्रकाशित